Ismaamulka Garissa oo xoojinaya falcelinta ka dhanka ah abaarta | Star FM
Home Wararka Kenya Ismaamulka Garissa oo xoojinaya falcelinta ka dhanka ah abaarta
Ismaamulka Garissa oo xoojinaya falcelinta ka dhanka ah abaarta
Dowladda hoose ee ismaamulka Garissa ayaa sheegtay inay sare u qaadayso dadaallada iyo barnaamijyada lagula tacaalayo saameynta abaarta.
Barasaabka Garissa Cali Bunow Qorane ayaa xusay inay kheyraadka badan u qoondeynayaan adeegyada biyaha.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in bulshada xoolo dhaqatada ah ee ay saameysay abaarta ee ku nool dhammaan deegaan baarlamaneedyada Garissa loo fidin doono gargaar la xiriira nolol maalmeedka.
Tani ayaa imaanaysa iyadoo warbixin uu soo saaray maamulka qaabilsan maareynta abaaraha ee (NDMA) uu sheegay in ismaamullada ay Garissa ka mid tahay ay ka jirto xaalad adag.
Previous articleSaraakiisha wasaaradaha waxbarashada iyo arrimaha gudaha oo raadin doono ardayda aan ku biirin dugsiyada sare
Next articleRuto oo ka hadlay caymiska caafimaad ee NHIF